Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) - Hello Sayarwon
Dr. K Zin Thwe မှ ရေးသားသည်။ 16/05/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) ကဘာလဲ။
ကလေးအသေမွေးခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်ဝန်အပတ် ၂၀ နောက်ပိုင်းတွင် မီးဖွားခြင်းဖြစ်ပြီး ထွက်လာသော ကလေးသည် သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်အပတ် ၂၀ မတိုင်ခင် ကလေးဆုံးရှုံးခြင်းကို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကလေးအသေမွေးသော အမျိုးသမီးအများစုသည် နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်များတွင် ကျန်းမာသော ကလေးလေးကို မွေးဖွားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကလေးအသေမွေးခြင်းသည် ခရိုမိုဆုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ (သို့) ချက်ကြိုး ပြဿနာကြောင့် ဖြစ်တာဆိုလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးသည်။ အကယ်၍ မိခင် နာတာရှည် နာမကျန်းမှု (သို့) မိဘ မျိုးရိုးဗီဇရောဂါကြောင့် ဖြစ်တာဆိုလျှင် နောက်တစ်ကြိမ် ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ် မြင့်မားပါသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်တွင် အောင်မြင်နိုင်သော အခွင့်အရေးမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါသည်။
Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကလေးအသေမွေးခြင်းသည် ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေသော အကြောင်းရင်များကို လျော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လက္ခဏာများမှာ ကိုယ်ဝန်အပတ် ၂၄ ပတ်ပြည့်ပြီးနောက်တွင် ကလေးအသေမွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော လက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်သည်။ တကယ်လို့ သင် တစ်စုံတစ်ခု စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်တွင် အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျိုးရိုးဗီဇ မူမမှန်မှု ပါသော မွေးရာပါ ချို့ယွင်းမှု နှင့် မျိုးရိုးဗီဇ မူမမှန်မှု မပါသော မွေးရာပါ ချို့ယွင်းမှု။
ချက်ကြိုးပြဿနာများ။ ချက်ကြိုးထွက်ကျသော အခြေအနေတွင် ကလေးမထွက်ခင် ချက်ကြိုးသည် မိန်းမကိုယ်မှ အရင်ထွက်ကျလာပြီး ကလေးကိုယ့်ဖာသာ အသက်မရှုနိုင်သေးခင် အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့မှုကို ပိတ်ဆို့လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ သို့မဟုတ် မမွေးဖွားခင် ချက်ကြိုးသည် ထုံးပြီး ကလေး လည်ပင်း (သို့) ခြေလက်များကို ရစ်ပတ်ချည်တုတ်ခြင်း။
အချင်းပြဿနာများ။ အချင်းသည် ကလေးကို အာဟာရထောက်ပံ့ပေးသည်။ အချင်းကွာကျသော ပြဿနာတွင် အချင်းသည် သားအိမ်နံရံမှ စောစောစီးစီး ကွာကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
မိခင်တွင် ဆီးချို (သို့) သွေးတိုးရောဂါ ရှိခြင်းသောအခြေအနေတွင် အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သန္ဓေသားကြီးထွားမှုနည်းခြင်းသည် သန္ဓေသားကို အာဟာရပြတ်လပ်မှုမှ သေစေနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
ပေါင်းသတ်ဆေး (သို့) ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဒ် ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခြင်း။
သွေးခဲခြင်း၊ သွေးကြောရောင်ခြင်း၊ အဆုတ်သွေးကြောတွင် သွေးခဲပိတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော သွေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ (သို့) မိသားစု ရာဇဝင်ရှိခြင်း။
ကလေးအသေမွေးခြင်း၏ တစ်ဝက်ခန့်သည် အချင်းနောက်ဆက်တွဲပြဿနာနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကလေးအသက်သွေးကြောနှင့် မိခင်ကြားဆက်နွယ်ပေးပြီး ကလေးကို အာဟာရထောက်ပံ့နေသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း (အချင်း) သည် ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ဟု ဆိုလိုသည်။
ကလေးအသေမွေးခြင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် သူတို့ကို သေဆုံးစေသော မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် အချို့ရှိကြသည်။ ကလေးအသေမွေးခြင်း၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သည် မိခင်ကျန်းမာရေးပြဿနာ ကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ ဥပမာ။ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း (သို့) ချက်ကြိုးပြဿနာ နှင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း အပါအဝင် အခြားပြဿနာများ ။
ငါ့ဆီမှာ Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကလေးအသေမွေးခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း (သို့) မူးယစ်ဆေး အလွဲသုံးစားပြုခြင်း
အသက် ၁၅ နှစ်အောက် (သို့) အသက် ၃၅ နှစ်အထက် ဖြစ်ခြင်း
Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ကလေးအသက်အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ သံသယရှိလျှင် Doppler အာထရာဆောင်း (သို့) ရိုးရိုးအာထရာဆောင်းကို အသုံးပြုပြီး ကလေးနှလုံးခုန်သံကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကလေးသည် သေဆုံးနေပြီး သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ချက်ချင်း အန္တရာယ်မရှိသေးလျှင် သင်ဘာဆက်လုပ်ချင်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်ရှိပါသည်။
သင်သည် သဘာဝအလျောက် မီးဖွားဖို့ စောင့်ဆိုင်းနိုင်သလို ဆေးဝါးအသုံးပြုပြီး သားအိမ်ပွင့်စေခြင်းဖြင့်လည်း မီးဖွားနိုင်သည်။ သင်ကြိုက်သော နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေဆိုလျှင်တော့ တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် မီးဖွားဖို့ လိုအပ်သည်။ ကလေးအသေကို ခွဲမွေးသောနည်းဖြင့် ထုတ်ရသည့်နည်းမှာတော့ ရှားပါးပါသည်။
ဤအခြေအနေတွင် မိဘတိုင်းအတွက် ဘာကြောင့် ကလေးသေသွားတာလဲဆိုသည်မှာ အမြဲမေးသော မေးခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သင့်ကို စောင့်ရှောက်မှုပေးနေသော သူများက သင့်ကလေး ဘာကြောင့် သေဆုံးရသလဲဆိုသော အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့ စစ်ဆေးနည်းများအကြောင်း ပြောပြပါလိမ့်မည်။
Stillbirth (ကလေးအသေမွေးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကလေးအသေမွေးပြီးနောက် မိဘများသည် ကလေးကို မြင်ချင်၊ ပွေ့ထားချင်ကြသည်။ သင်သည်လည်း သင့်ကလေးကို နာမည်ပေးပြီး ဓါတ်ပုံများရိုက်ကာ အမှတ်တရများ ဖန်တီးချင်ပေလိမ့်မည်။ သင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်သလဲဆိုတာ သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဘာလုပ်ရမလဲဆိုသော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် တစ်ဦးချင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး ဘယ်အရာကိုမှ မှန်သည်၊ မှားသည် ပြောလို့ မရပါ။
ကလေးအသေမွေးရသော အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေခြင်းသည် နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ်ဝန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေး ဘာကြောင့် သေဆုံးရသည်ဆိုသော အကြောင်းကို ရှာဖွေဖို့ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သာ ရင်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ ခွင့်ပြုသည်ဆိုလျှင် နောက်ပိုင်း ရက်ချိန်းတွင ဆရာဝန်အကြီးက သင့်ကို စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကို ပြောပြပါလိမ့်မည်။ သင်သည် နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်များတွင် ဖြစ်နိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ကလေးအသေမွေးခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ကလေးအသေမွေးခြင်းကို ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေး ရှောင်ခြင်း ။ ထိုအရာများသည် ကလေးဖွ ံ့ဖြိုးမှုကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းနှင့် ကလေးအသေမွေးနိုင်ချေ အန္တရာယ်များစေသည်။
ကိုယ်ဝန်ရက်ချိန်းများကို ပုံမှန်သွားပြပါ။ သို့မှသာ သင့်ကလေး ကြီးထွားမှုနှင့် ကလေးအခြေအနေကို သေချာစောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကလေးအသေမွေးခြင်း နှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းသည် မိဘများအတွက် စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရသည်။ အခြားကလေးများနှင့် မိသားစုဝင်များကို စိတ်ထိခိုက်စေသည်။ သင့်ခံစားချက်များကို သင့်ဆရာဝန် ၊ လက်သည်ဆရာမ၊ အခြား ကလေး ဆုံးရှုံးဖူးသောသူများ နဲ့ ပြောဆိုတိုင်ပင်ပါ။
သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အချို့အဖွဲ့များသည် ကလေးအသေမွေးဖူးသော မိဘများ (သို့) အထူးလက်သည်ဆရာမများ ကိုယ်တိုင် ဦးစီး ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
Stillbirth. http://www.nhs.uk/Conditions/Stillbirth/Pages/Definition.aspx. Accessed2Mar, 2017.
Understanding Stillbirth — the Basics. http://www.webmd.com/baby/understanding-stillbirth-basics. Accessed2Mar, 2017.